Vola Mampihomehy Ho An’ny Lalao Olaimpikan’ny Andro Ririnina Any Rosia · Global Voices teny Malagasy
Vola Mampihomehy Ho An'ny Lalao Olaimpikan'ny Andro Ririnina Any Rosia
Voadika ny 03 Novambra 2013 22:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, русский, 日本語, Italiano, srpski, English
Fampahafantarana ilay vola taratasy vaovao 100 Ruble ho an'ny Lalao Olaimpika. Dika sary avy amin'ny YouTube.
100 andro latsaka sisa dia ho tonga amin'ny lanonam-panokafana ny Lalao Olaimpika 2014 fanao amin'ny andro ririnina. Arakaraky ny hanatonan'ilay datin'andro, miseho masoandro ireo tantara ratsy. Ny iray akaiky indrindra [ru] dia mifamatotra amin'ilay vola taratasy vaovao 100-ruble natao ho an'ny Lalao Olaimpika navoaka tamin'ny herinandro lasa teo.
Tamin'ny voalohany dia nahafaly ireo Rosiana biloagera ny momba ilay vola taratasy vaovao. Matetika no vola vy no avoaka ho fankalazana ny Lalao Olaimpika, saingy ity indray mitoraka ity no tsy fahita firy fa namoahana vola taratasy natokana ho an'ny Lalao Olaimpika (namoaka iray i Shina ho an'ny lalaon-Dohataona 2008). Tsy toy ny mahazatra, mijidina fa tsy marindrano ny sary. Ery amin'ny sisiny iray amin'ilay vola misy mpilalao skate, nalaina sary eo am-pitsambikinana. Sary notsongaina tamin'ny fifaninanana nampanaovin'ny Banky Foiben'i Rosia. Ny mpandresy, izay maneho tsara ny Lalao Olaimpika ny sariny, dia i Pavel Bushuyev [ru], mpianatra iray avy ao amin'ny Akademian-javakanto ao Saint Petersburg.
Niarahaba azy noho ny fandresena azony i Pavel Protasov, bilaogera, no sady naneho hevitra hoe [ru]:
Enga anie, any am-parany mba hisy fifanarahana hataon'ireo mpitantana ny banky amin'ilay tompon'ny asa ka angamba mba hisy zavatra ho aloa aminy ihany.
Kanefa, tsy ela loatra ho an'ireo Rosiana bilaogera ny nahita [ru] hoe ity sarinà mpilalao skate nandresy ity, hita ankehitriny eo amin'ilay vola taratasy vaovao, dia nalaina avy aminà tahirin-tsary iray tao amin'ny aterineto, StockExchange — mivandravandra be ny vokany, hala-tàhaka.
dika sarin'ilay mpilalao skate ao amin'ny StockExchange.
i Andrey Malgin, bilaogera, dia nampitaha azy io [ru] taminà tranga iray tsy misy hafa aminy [ru] izay nitranga fony nasiam-panavaozana ny Teatra Bolshoi ao Moscow, roa taona lasa izay.
Ity hadisoana sarotra hadinoina ity dia azo ampitahaina tsotra amin'ilay tranga nalaza fony i Yuri Grymov nanao sary famantarana raitra sy lafo vidy ho an'ny Teatra Bolshoi, ary avy eo hitan'ny olona taty aoriana kely tany anatinà bokin-tsary tranainy antsoina hoe Aridi ilay sary mahafinaritra, ka tao izy io dia namidy 99 dolara ho an'izay mila azy.
Na izany aza, Ilya Varlamov, mpitoraka bilaogy an-tsary, dia niaro an'i Byushev sy ny asany, tamin'ny filazana [ru] fa tsy dia raharaha be manao ahoana izany, raha mbola sary ihany no niaingàny :
Amin'ny ankapobeny, tsy takatro loatra hoe inona no olana, hoe notrandrahana avy aminà sary ve ilay sarinà mpilalao skate? Ahoana, amin'ny hevitr'ireo mpanakiana, no tokony ho nanaovana ny sarin'ilay mpilalao skate? Natao sary an-tsaina ve? Avy aminà maodely iray?
Nampiany, hanakianany ireo mpanakiana :
Mba efa fantatrareo ve hoe ahoana no fomba fiasan'ny mpanome endrika? Tsy misy zon'ny hafa voahitsakitsaka, fa ny marina raha manambatra ireo sary roa ianao, dia hahita fa tsy hala-tahaka 100% ilay sary eo amin'ny vola taratasy… Adala tsy mieritreritra mihitsy ny olona amin'itony Lalao Olaimpika itony. Tahaka ny hoe misy fifaninanana any ho any mba “hahitàna izay henatra goavana ho an'i Rosia”.
Satria efa miha-manakaiky ny Lalao Sochi, ary mitohy mivangongo ireo tantara ratsy, marina àry ve ny an'i Varlamov? Mitady izay fomba hahafahana mikonetaka fotsiny ve ireo Rosiana bilaogera, sa tsy handeha amin'izay laoniny ny fampiantranoan'i Rosia ny Lalao Olaimpika?